SELC English – Level (I) – Edu Myanmar | Online Classes | Center Classes
SELC English - Level (I)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ကျကျထိထိရောက်ရောက် ပြောဆိုရေးသားနိုင်စေဖို့ တာဝန်ယူသင်ကြားပေးပါမယ်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်လာလျင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိစေဖို့ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်
Level တစ်ခုပြီးတိုင်း သင်တန်းမှ တတ်မြောက်ကြောင်း certificate ထုတ်ပေးပါမယ်
Level သုံးခု အနည်းဆုံးပြီးအောင်တက်နိုင်လျင် England နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု certificate များရရှိစေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးပါမယ်
အရည်အချင်းလည်းပြည့်မီ၍ သင်တန်းသားကိုယ်တိုင်လည်း ဆန္ဒရှိပါကI.E.L.T.Sကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာအင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများဝင်ရောက် ဖြေဆိုနိုင်ရန် ဆက်လက်သင်ကြားပေးပါမယ်
ဒီသင်တန်းမှာ ဘာတွေကို ဘယ်လိုသင်ပေးမှာလဲ?
England နိုင်ငံ Oxford University နှင့် Cambridge University တို့မှ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ထုတ်ဝေပေးထားသောသင်ရိုးများကို အသုံးပြုကာ ဆရာကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ သင်ကြားပြသခြင်း
စာသင်သားများအား individual work,pair work,group work များပေးလျက် အနီးကပ်ကြီးကြပ်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
ခေတ်မီသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဖြစ်သော (C.A.I စနစ်)ကွန်ပြူတာအခြေပြု၍သင်ကြားခြင်း
Powerpoint အသုံးပြု၍ ရှင်းလင်းသင်ကြားခြင်း – သင်တန်းသားများကိုယ်တိုင် Powerpoint presentation များပြုလုပ်ရခြင်း
Internet ကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြု၍ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ ရှာမှီးရခြင်း
အင်္ဂလိပ်သီချင်းများသီဆို၍ စကားလုံးအသစ်များ ရရှိစေရန် အသံထွက်ကောင်းလာစေရန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်များကြည်ရှုလေ့လာ့၍ Speaking & Listening Skills များ တိုးတက်လာစေရန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
Movie review များရေးသားစေ၍ Writing Skill မြှင့်တင်ပေးခြင်း
အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရနှင့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ gameများ ဆော့ကစားခြင်း
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း
IT နည်းပညာများအသုံးပြု၍ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း
စတဲ့ နိုင်ငံတကာဘာသာစကားသင်တန်းများနှင့် British council ကဲ့သို့သောသင်တန်းများတွင် လက်ရှိ သင်ကြားပေးနေသော စနစ်များအတိုင်း ကဏ္ဌ စုံလင်စွာ သင်ကြားပေးမှာပါဖြစ်ပါတယ်
ဒါ့အပြင် Tourism သဘောတရား နှင့် မြန်မာမှုကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ရှိရာ ပြတိုက်ကြီးများ နန်းတော်ကြီးများ မြို့ဟောင်းများသို့ သွားရောက်လေ့လာ၍ ဗဟုသုတ ရရှိစေရန် ပို့ဆောင်ပေးခြင်း ရျေွှတိဂုံစေတီ အံ့ဖွယ်ကိုးပါး ပြတိုက်ကြီးများရှိ မြန်မာ့ရေးရာများ ရှေးဟောင်းနယ်မြေများရှိ မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုရှင်းလင်းပြတတ်စေရန် ရေးသားနိုင်စေရန် အထူးသင်ကြားပေးခြင်း စတဲ့ အများနှင့်မတူ တမူထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်ကောင်းများစွာလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်
သင်တန်းသားတွေအများကြီးနဲ့ သင်ရမှာလား? ထိရောက်မှုရောရှိပါ့မလား?
ထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ဖို့ သင်တန်းသားဦးရေအများကြီးမထားဘဲ ( ၁၆ ဦးဝိုင်း ပုံမှန်ဝိုင်းနှင့် ၄ဦးဝိုင်း အထူးကြပ်မတ်ဝိုင်း) လူဦးရေအကန့်အသတ်ဖြင့်သာလက်ခံပါမယ် အခြေခံမှစကာ အဆင့်မြင့်မြင့် ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်သည်အထိ အဆင့်အလိုက် သင်ကြားပေးပါမယ်
သင်ကြားပေးပါမယ် ဒီသင်တန်းရဲ့ ထူးခြားချက်က?
အခြားသင်တန်းတော်တော်များများမှာ Speaking တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ သင်ကြားပေးလေ့ရှိတာမို့ Four skills ကို စနစ်တကျ နဲ့ အခြေခံကျကျတတ်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်
ဒါ့အပြင် Reading , Writing , Vocabulary , Grammar စသည်တို့ကိုလည်း ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးခွဲပြီး လက်ခံသင်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်း မသက်သာလှပါဘူး ဒီသင်တန်းမှာတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို သင်တန်းပုံစံအမျိုးမျိုးခွဲခြားတာမျိုးမလုပ်ဘဲ သင်တန်းတစ်ခုတက်ရုံနဲ့ Speaking, Reading , Writing , Vocabulary , Grammar , Pronunciation,Idioms စတာတွေအားလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း သင်ယူလေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီသင်တန်းမှာ အပြောစွမ်းရည် နားထောင်မှုစွမ်းရည် စာဖတ်စွမ်းရည် အရေးစွမ်းရည် အပြင် မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ သဒ္ဒါ ဝေါဟာရ အသံထွက် အီဒီယမ် နှင့် အရပ်သုံးစကားပြောဟန်တို့ကို ဟန်ချက်ညီညီ သင်ကြားပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ် ( ပေးရတဲ့ သင်တန်းကြေးထက် များစွာသာလွန်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို လေ့လာသင်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် )
ဒီသင်တန်းတက်ရင် ဘာတွေတိုးတက်လာမှာလဲ ?
အပြောစွမ်းရည် အသံထွက် နှင့် နားထောင်မှုစွမ်းရည် အပိုင်းတွင် လက်တွေ့ကျသော စကားပြောအရည်အသွေး နှင့် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကို တိုးတက်လာစေရန် နိင်ငံတကာအဆင့်မီအသံထွက်တတ်စေရန် အလေးပေးသင်ကြားပါမယ် အရေး အဖတ် နှင့် ဝေါဟာရ အပိုင်းမှာလည်း အခြေခံမှစ၍ အဆင့်မြင့်အရေးအသားများကိုပါ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လာစေရန် အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော စာအုပ်များမှတဆင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သတင်းစာ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်း စသည်တို့ကို နားလည်သဘောပေါက်သည်အထိဖတ်တတ်လာစေရန် ဝေါဟာရများကို လှလှပပ မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်စေရန် စနစ်တကျသင်ကြားပေးပါမယ်